အခွင်.ရေးသမားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အခွင်.ရေးသမားများ
Posted by ရွှေဘိုသား on Jan 21, 2011 in News | Comments Off on အခွင်.ရေးသမားများ
မတန်မရာတောင်းယူလို.ပါ။ကျွန်တော်မင်္ဂလာဈေးမှာအလုပ်လုပ်နေတာဆိုတော.ပလာဇာ ရှေ.ကနေကားစီးပါတယ်။အခါတိုင်းစီးနေကျ သုဝဏ္ဏကို100ပဲပေးရတာပါအခုကျတော.200တောင်းပါတယ်။အချိန်အခါမဟုတ်တော.ပေါ.ဆစွာပဲထီးမယူခဲ.ပါဘူး။ဒါကိုပဲသူတို.တွေကအခွင်.ရေး
ယူပြီးမိုးရွာထဲတော.ကြာကြာမနေနိုင်ပါဘူးမဖြစ်မနတတ်စီးမှာပဲဆိုပြီးတောင်းတာပဲဖြစ်မှာပါ။အဲဒါနဲ.မစီးပဲ တာမွေထိ အခါတိုင်း 50 ပေးရတဲ.ကားကို100 ပေးစီးခဲ.ပါတယ်။တာမွေကနေ ချက်ကြီးစီးရင်တော. 50 ပဲပေးရမှာပဲဆိုပြီးတော.အမှန်ကလည်း ပိုက်ဆံက150ပဲအကြွေပါတာမို.ပါ။ကိုယ်.အကြောင်းကိုသိနေလို.ပါထောင်တန်ပေးလို.အကြွေရပြီဆိုတာနဲ. သေချာပေါက်ကုန်ပါပြီ။ဒါမို.ပလာဇာကနေ တာမွေထိ 100 ပေါ.တာမွေကနေသုဝဏ္ဏထိ 50 ပေါ.ဆိုပြီးတွက်စီးလာတာပါ။တကယ်တန်းတာမွေကနေစီးနေကျချက်ကြီးစီးပြန်တော.လည်းအခါတိုင်း 50ကားက100တောင်းပါတယ်။တစ်ချို.လူတွေမစီးပဲပြန်ဆင်းကြပါတယ်ကိုယ်ကတော.ချမ်းတာနဲ.ဖြစ်သလိုပဲစီးပြီးမြန်မြန်ရောက်ပြီးရောဆို
ရှေ.မှာကျတော.ကျွန်တော်.က်ဆိုးတဲ.အဖြစ်တောင်တွေ.ရပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို.သုဝဏ္ဏကားစီးဖူးတဲ.လူတွေတော.သိမှာပါ သုဝဏ္ဏလမ်းဆုံကနေစုပေါင်း2မှတ်တိုင်ပဲစီးတာကိုချက်ကြီးက200တောင်းတာတော.လွန်ပါတယ်။အခါတိုင်း တာမွေကနေ စံပြဈေးထိစီးမှ 50 ပေ